Futhi Manje Ngobumnyama Bokumaketha Okuqukethwe kwe-B2B | Martech Zone
Njengoba inkampani isebenzisa izinsizakusebenza ezidingekayo isu lokuqukethwe elisebenzayo, kwesinye isikhathi kuyindleko enzima ukuyigwinya ngoba idinga ukuthola umfutho negunya embonini yabo. Abanakho ukukhetha ngaphandle kokuthenga umkhondo obizayo ngokusebenzisa ukukhangisa nezinhlelo zokusesha ezikhokhelwayo. Futhi ukulinda akuyona ukuphela kwenselelo - le infographic evela kuScripted ikhomba ezinye izinselelo ezimbalwa kepha inikezela ngamasu amahle wokuzinqoba.
Njengoba ukumaketha kokuqukethwe kuqhubeka nokwanda kokuthandwa kuyo yonke imboni, abathengisi abaningi bagxile kunani elingaletha etafuleni. Kuyiqiniso, ukumaketha okuqukethwe kuyindlela enhle yokufinyelela izithameli ezintsha, ukukhiqiza ukuqwashisa ngomkhiqizo, ukufundisa abathengi nokuningi - kepha futhi kungalimaza isu lokumaketha, ikakhulukazi uma kungenziwanga ngendlela efanele. UNicole Karlis, kubhaliwe
Ingxenye yabo bonke abathengisi ayinayo i- ibhalwe phansi isu lokumaketha lokuqukethwe kanti u-62% ucabanga ukuthi yimizamo yabo ayisebenzi. Vele, ama-21% empeleni awekho ukulinganisa iyini imbuyiselo yotshalo-mali futhi izingxenye ezimbili kwezintathu kuphela zokuqukethwe okwenziwayo empeleni kuyashicilelwa. I-script inikeza izindlela eziyi-8 zokugwema lezi zinselelo - kusuka ekubhaleni isu lakho lokuqukethwe, ukudala ikhalenda lokuqukethwe ngokukhipha okungaguquguquki, ukusungula izinhloso, ukuhlaziya izithameli zakho, nokuphindaphinda okuqukethwe okusebenzayo.
Bheka yonke imininingwane kule infographic bese uqhafaza ukuze udlulele kubhulogi Ebhaliwe lapho benethoni yezinsizakusebenza zakho ukuze uthuthukise isu lokukhangisa okuqukethwe nokwenza!
Tags: b2bukumaketha kokuqukethwe kwe-b2bIzinselelo zokumaketha kokuqukethwe kwe-b2bizinselelo zokuqukethwe